DOWNLOAD NY FARANY FARANY AN'NY MYDEFRAG - PROGRAMME REVIEW - 2019
Raha mifandray amin'ny fitomboan'ny fampielezana ny tambajotra torrent, izay nanosika ireo tranonkala fifampizarana tranainy teo aloha tao an-tokontany, dia ny fanontaniana dia nisafidy ny mpanjifa mora indrindra amin'ny fifanakalozana fampiasa amin'ny alalan'ity protocol ity. Ny fandaharana malaza indrindra dia μTorrent sy BitTorrent, saingy tsy misy fampiharana izay afaka hifaninana amin'ireo goavam-be ireo? Ny mpanjifa qBittorrent no maimaim-poana ho an'ireo mpanjifa roa tonta.
Ny fampiharana Qubittorrent ao amin'ny arsenal dia manana fitaovana ho an'ny fifampizaràna votoaty mora foana ao anaty tamba-jotra.
Lesona: Ahoana no fomba fitehirizana rakitra ao amin'ny qBittorrent
Manoro hevitra isika mba hahita: Programa hafa amin'ny famoahana torrents
Raha ny mpanjifa rehetra, ny tanjona lehibe indrindra an'ny qBittorrent dia midika ny votoaty ilaina. Azonao atao ny manomboka ny download amin'ny fomba roa: ravao ny rakitra torrent efa ao amin'ny solosainao ao amin'ny programa, na amin'ny fampidirana rohy. Ny fampiharana Qubittorrent dia manohana ny asa, anisan'izany ny rohy matevina sy ny hashes.
Amin'ny dingan'ny fampidinana, ny votoaty am-pinday dia azo halefa, hanova anarana, hampiasaina amin'ny finday, miaraka amin'ny mety hisian'ny fanavaozana azy amin'ny ho avy amin'ny dingana efa voafafa.
Afaka mampiasa ny laharam-pandaharam-potoana ahafahana mijery ny laharam-pahamehana ianao, ary tsy misy fiantraikany amin'ny asa hafa atao ao amin'ny solosaina.
Famoahana ny votoaty
Ny asa famitana ny votoatiny dia tsy mitaky ny famahana ny tanana. Raha vao manomboka mandefa ny rakitra dia mamadika azy io ny programa. Taorian'ny fandefasana feno ny rakitra, ny qBittorrent dia mamaritra tanteraka ny famindrana azy any amin'ny fomba famaranana. Azonao atao ny manakana ny dingan'ny famindrana rakitra maimaim-poana amin'ny mpampiasa hafa.
qBittorrent koa dia manana ny asany amin'ny famoronana raki-drakitra, natao handaminana fizarana vaovao amin'ny mpandeha. Ny fanatanterahana io asa io dia tsotra.
Fitaovana qBittorrent fanampiny
Ny fampiharana qBittorrent dia manana milina fikarohana an-tranonkala. Mitady mpandehandeha malaza amin'ny anaran'ny solonanarana izy io. Mandritra izany fotoana izany, io lohahevitra io dia mivantana mivantana ao amin'ny fandaharana, fa tsy ao anaty navigateur. Noho izany, aorian'ny famoahana ilay olana, afaka manomboka avy hatrany ianao maimaim-poana, izay manavaka qBittorrent avy amin'ny mpanjifa toy izany.
Anisan'ireo singa fanampiny amin'ny programa, ianao koa dia mila manasongadina ny asehon'ny fanehoana ny rakitra entana amin'ny alàlan'ny mpilalao media napetrak'ireo default ao amin'ny rafitra miasa, ary koa ny fahafahana misintona ireo rakitra misokatra.
Fifehezana ny fitantanana;
Fiteny amin'ny fiteny maro (fiteny 45, anisan'izany ny rosiana);
Lakroa (Windows, Linux, OS X, sns);
Ny fanatrehan'ny fikarohana fikarohana ho an'ny mpamadika torolàlana.
Famerana ny fidirana amin'ny mpamily sasany.
Ny programa qBittorrent dia manana fahaizana bebe kokoa noho izy miasa amin'ny tambajotra torrent noho ny mpifaninana mivantana. Ny mety hitranga ao ambadiky ny fampiharana azy dia azo hazavaina fotsiny amin'ny fikambanana ara-barotra tsy nahomby.
Download qBittorrent maimaimpoana
Mamorona raki-drakitra mampiasa qBittorrent Transmission BitComet Bit Torrent
qBittorrent dia fangatahana fampiharana malalaka BitTorrent. Ny fandaharana dia tsotra sy mora ampiasaina, ary manana toerana mahasoa maro ao amin'ny toerany izy.
Mpandrindra: Christophe Dumez